Dumarka cadaanku maxay ku jecelyihiin ragga madoow? | Raganimo University
Dumarka cadaanku maxay ku jecelyihiin ragga madoow?
Waxaa la wada ogyahay in dumar badan oo cadaan ah ay jecelyihiin ragga madoow. Balse maxay tahay sababtu? Mowduucaan ayaan ku eegi doonaa dhowr sababood oo ay sheegeen dumarka cadaanka ah in ay ku jecelyihiin ragga madoow.
Waxaa hubaal ah arinta ugu muhiimsan ee ay dumarka cadaanka ah ku jecelyihiin ragga madoow in ay tahay waxqabadkooda sariirta. Dumar badan oo cadaan ah ayaa aaminsan in ragga madoow ay ka gus weyn yihiin kuwa cadaanka ah. Arintaan ayaa xaqiiqo u badan, iyadoo ragga madoow lagu sheeko in ay yihiin kuwa ugu guska weyn aduunka.
Dumarka guud ahaan, gaar ahaan kuwa cadaanka ah ayaa jecel ragga guska weyn. Inkastoo ay dood ka taagantahay muhiimadu uu leeyahay guska weyn iyo in uu faa'iido gaar ah u leeyahay xaga galmada, ayaa haddana dumar badan ay niyada ku hayaan in ay la seexdaan ninba ninkuu ka gus weynyahay.
Arinta kale oo dumarka cadaanka ah ay ku jecelyihiin ragga madoow ayaa ah in ay ka dabeecad duwanyihiin kuwa cadaanka ah. Ragga cadaanka ah ayaa qaar badan yihiin kuwo aamusnaan badan oo aan sheekada jeclayn. Ragga madoow ayaa ka furfuran oo ka dabeecad fiican. Tani ayaa soo jiidasho weyn ku dhalisa dumarka cadaanka ah.
Midabkooda & jirkooda
Dumar badan oo cadaan ah ayaa guud ahaan iska jecel cid ka duwan jinsiyadooda iyo midabkooda, iyadoo ragga madoow ku amaanaan in ay leeyihiin midab qurxoon iyo jirkooda oo aad u macaan isla markaana ay jecelyihiin in ay salaaxaan oo ay ku raaxaystaan.
Dhaqan iyo diin
Ragga madoow ayaa ah kuwo inta badan ku dhagan dhaqankooda iyo diintooda. Arintaan ayaa dumarka cadaanka ah qaar dhib ku ah balse qaar badan ayay soo jiidataa in ay xiriir la yeeshaan nin diin iyo dhaqan leh oo diyaar u ah in uu reer dhisto, halka qaar badan oo cadaan ah ay doonayaan in ay iska raaxaystaan balse aysan dooneyn in ay reer dhistaan.